Nhau - Zuva rekuvaka ligi
Kuti vawedzere hupenyu hwevashandi hwenguva, kurerutsa kumanikidza kwebasa, uye nekuvapa mukana wekuti vazorore zvachose mushure mekushanda, Hangzhou Hengao Technology Co, Ltd. yakaronga chiitiko chekuvaka timu muna Zvita 30, 2020, uye vashandi makumi mashanu nevashanu ve kambani yakapinda muchiitiko ichi. Mushure mekusangana nerubhabhatidzo rwemvura zhinji, iyo yakareba-isingaonekwe "Silver Rwizi bhuruu" yakaonekwa mudenga. Na9: 30, vese vashandi vakaungana pasuwo pechivakwa chikuru ndokusimuka kuenda kwavaienda - The Exposition Park. Nzira yese, taiseka nekuseka, tichimhanya munzira isina chinhu tichigutsikana nemoyo yedu. Na10 o wachi, vese vashandi vanozoungana pamberi pebindu hombe kuti vaone zviitiko zvekuvaka zvikwata. Ichi chiitiko chakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: kushanya kupaki, kunhonga michero nemiriwo, kupaza mukati, mitambo yemapoka, uye bhaa rekunakidzwa.
Isu takateedzera mutungamiriri kupinda mubindu rekuratidzira horo kushanya. Isu takaona kuti mune imwechete greenhouse paive nezvose zvakajairika zvinomera muChina uye zvakakosha zvirimwa kune dzimwe nyika, uye zvakare yakafukidzwa neakasarudzika emiti chiratidziro. Mushure mekushanya, tese takanzwa kuvhurika kwemaziso. Mukuita kwekutora michero nemiriwo, isu tinogadzirira-pane ruzivo, tinogovana ruzivo rwekunhonga michero nemiriwo, tichisiya michero nemiriwo magirinhi maturusi isu tisina mashoma e "mukombe".
Paive nebreak pfupi mushure mekudya kwemasikati. Zvino, vese vashandi vakaungana munzvimbo yakavhurika yemutambo wekuwedzera kwechikwata, isu takakamurwa kuita mapoka mashanu, mumutambo wega wega kukwikwidza zvine simba, kubatana kweboka kunotamba zvisingaite uye zvakajeka. Panguva ino, usaite kuti United States idzore kutinhira kupururudza, kuravira bhengi kwehafu yenguva inodira mvura inouya kamwe kamwe, mhuri hombe haina kunge yakaipa mamiriro ekunze ndiyo yekunakidzwa, muhafu yepiri yemabiko mukukomborerwa kwakanaka kwemunhu wese sekurongwa, muhupenyu hwenyeredzi vakagamuchira chipo chekuzvarwa, yega kambani yekushamisika uku, rega munhu wese adziye zvakanyanya mumvura inotonhora. Wese munhu ari mukuseka, mhedzisiro inobudirira yechikwata - zviitiko zvekuvaka. Kuburikidza neichi chiitiko chekuvaka timu, isu takawedzera kunzwisisana, takaswededza padyo nemanzwiro evose, takawedzera kubatana uye kubatana kwevashandi vese veHangzhou Hengao Technology, ngatibvei nechido chepamusoro mune ramangwana basa.